ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း နဲ့ လာအိုတိုယိုတာ အသင်းတို့ 2020 AFC Cup အုပ်စု(F) ပွဲစဉ် ယှဉ်ပြိုင်ကစား | YTV
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း နဲ့ လာအိုတိုယိုတာ အသင်းတို့ 2020 AFC Cup အုပ်စု(F) ပွဲစဉ် ယှဉ်ပြိုင်ကစား
February 28, 2020 82 Viewers
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းက လာအိုတိုယိုတာ အသင်းတို့ရဲ့ 2020 AFC Cup အုပ်စု(F) ပွဲစဉ်ကို ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်…
ပွဲအပြီးမှာ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းက လာအိုတိုယိုတာ အသင်းကို ၃ ဂိုး - ၂ ဂိုး နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကို ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်.
ဒီပွဲရလဒ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာရောက်ကြည့်ရှုသူဖြစ်တဲ့ ကိုရဲနိုင်ဝင်း (Myanmar Special) က
“ ဒီနေ့ပွဲမှာ နှစ်သင်းစလုံး ခပ်အေးအေးပဲ ကစားသွားတယ်. ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းက ပထမပိုင်းမှာ ၂ ဂိုးရထားတော့ ပွဲကိုထိန်းဆော့ နေတယ်လို့ထင်တယ်. လာအို တိုယိုတာက ဂိုးတွေပြန်ရလာမှ ပွဲက ပြန်ပြီအသက်ဝင်လာတယ်. ၃ ဂိုးသွင်းနိုင်ပေမယ့် ၂ ဂိုး ပြန်ပေးလိုက်ရတာဆိုတော့ ပေးဂိုးတော့ များသွားတယ်. နည်းစနစ်ပိုင်းကတော့ သိပ်ပြီးကွာဟချက်မရှိပါဘူး. တိုယိုတာကလည်း အရမ်းကောင်းတဲ့ အသင်းထဲမှာ မပါပါဘူး“ လို့ သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်…
ဒီပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ပေမယ့် အားရကျေနပ်ဖွယ်တော့သိပ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်း ကိုသက်ထွဋ်ညီညီက “ဒီနေ့ဆော့တာ ပုံမှန်ခြေစွမ်းကို မရောက်ဖူး. လူစားလဲတဲ့ နေရာမှာလည်း သိပ်အဆင်မပြေဘူး ဆိုတော့ လိုအပ်ချက်လေးတွေ ရှိတယ်” လို့ အကြံပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်…
Triple Camera , Game Monster လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ Realme C3 နဲ့ C3i စမတ်ဖုန်းအသစ် မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွက်″မြန်မာ့လူမှုအကျိုးပြု(စံပြ)ထူးချွန်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ